Kukangaki ushintsha amaphijama yakho? Ezimweni eziningi, abantu musa ukwenza lokhu njalo uma kunesidingo. Ngokwezibalo, amadoda ukukwenza mayelana kanye njalo emavikini amabili, futhi abesifazane ulinde isikhathi eside izinsuku ngisho ezimbalwa! Eqinisweni amaphijama uthola ezingcolile pretty masinyane, kwakungaba into efanele okumelwe lushintshwe nsuku zonke. Abanye abantu ukuxazulula le nkinga, kokulala nqunu. Abanye, ngokusobala, asesabi ukugqoka izingubo ezifanayo amasonto. Sekuyisikhathi ukunqoba lo mkhuba. Shintsha amaphijama ngakho akuvamile - angahlanzekile. Kungani lokhu kubaluleke kangaka? Funda izizathu ezimbalwa ngoba inhlabathi phezu izingubo ukulala kungaba yinselele.
Kubantu abaningi, sesikhumba esincane amabhaktheriya Staphylococcus. Lena bacterium evamile uhlala esikhumbeni, in the ekhaleni, emlonyeni, ngokuvamile ngaphandle abangela izifo. Nokho, uma egqoke amaphijama ngokuphindaphindiwe, ama-bacterium bayozibuthela futhi uphindaphinde. Uma isikhumba has ukusikeka, izinwele ingrown nomunye umonakalo, ama-bacterium Ungafaka emzimbeni. Uma uchitha isikhathi esiningi ukushintsha amaphijama yakho, ungakwazi ukunqoba izifo ezisongela ukuphila adala izifo.
Induna - kuba njalo edabukisayo. kukhungathekise Ikakhulukazi lapho ukubukeka kwabo kungavinjelwa kalula. Uma ungenalo ukushintsha ngokuvamile amaphijama, amaseli bacterium, uwoyela isikhumba esifile buthelela nezicubu. Konke lokhu udaka ubusuku bonke yayicindezele izimbobo zesikhumba. Ngenxa yalokho, ezimbotsheni baba avimbekile, ziba ngegciwane eholela ukubukeka nezinduna noma amathumba. Ngakwelinye ihlangothi, induna kungabangela ukuthuthukiswa izifo eziyingozi kakhudlwana. Ukuvimbela nesenzakalo yabo, wena ukuvikela umzimba wakho engozini enkulu kakhulu.
Imikhaza bahlala endlini ngayinye, awukwazi ngokuphelele ukuqeda kubo. Noma kunjalo, kufanele senze konke esingakwenza ukuze bawasuse embhedeni futhi ingalali endaweni yakhe. Uthuli izibungu ukudla amaseli isikhumba esifile, ngakho basuke kakhulu ukhangwa amaphijama. I ezingcolile amaphijama izibungu ikakhulukazi ezinkulu, okungase kubangele izinkinga zokuphefumula. Uma une nezici ezithile ukuze nezinkinga emaphashini noma komzimba, nawe nakanjani kudingeka ukuqapha ekuhlanzekeni izingubo zabo ukulala.
Wonke umuntu uyazi ukuthi umzimba ezingcolile ngokushesha uqala sizibonise i nephunga edabukisayo. Ukuze nomuzwa ezimbi, "ukunambitheka", udinga amaphijama kakhudlwana futhi ihlanzekile. Indwangu ubamba umjuluko ubusuku ngabunye, kanye amagciwane babathanda umswakama. Uma ushawa kusihlwa futhi ke wagqoka amaphijama ezingcolile, ngeke aphinde athole ezingcolile futhi ake amabhaktheriya ezingemnandi akha umzimba wakho. Kufanele uzame ukugwema.
Uma nibulala amaphijama ezingcolile kusihlwa, ekuseni uyozizwa zingcolile, ikakhulukazi uma uthanda ushawa kusihlwa. Ukushintsha izingubo ngokushesha emva uvuka kusukela amaphijama angcolile umsebenzi izingubo, ngeke azizwe engakhululekile - efana ukuletha ukungcola endlini ehlanzekile. Ebusuku, lakho konke okwakusendlini amaphijama akhe, it is angena isikhumba sakho. Uma amaphijama ezingcolile, uyozizwa ngokufanele.
Uma ngiyolala sinezingubo ezihlanzekile ungakhululeka futhi unethezeke. Uzoba lula kakhulu ukuzumeka. Ngokuphambene, e amaphijama ezingcolile uzozisola yokuqwasha, uyozizwa ukuluma, wena nje ngeke ukhululekile kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uthuli izibungu kuthinte uphefumulele phezulu phakathi kobusuku. Ngenxa yalokho, wena ahone, futhi kunomthelela omubi ubuthongo. Uma usuvele unezinkinga ubuthongo, kufanele siqiniseke ucabange indlela ukushintsha amaphijama yakho kaningi ngangokunokwenzeka.
Uma ulala amaphijama ezingcolile, ungase uhlangabezana nezinkinga nge-komzimba. Uma iguliswa othulini, kufanele ushintshe izingubo sokulala okungenani njalo ngemva kosuku. Komzimba, esifubeni somoya nezinye izifo zemigudu yokuphefumula nesifo zenziwa nzima ebusuku nje ngoba amanga ukuphefumula nzima. Lapho kwezicubu buthelela izibungu futhi amaseli isikhumba esifile, isimo singasalawuleki, futhi kungenzeka ubhekene nezinqumo yokungezwani komzimba okukhulu noma somoya kuhlasela.
Uma ufaka i-amaphijama ezingcolile, khona-ke ukuphoqa amasosha akho omzimba ukulwa kokuhlasela engapheli ngenxa yezinkinga ezihlukahlukene webhaktheriya umgudu wokuphefumula, izifo okubangela ukuqubuka. Zonke lezi zici buthaka ukuvikelwa umzimba wakho. Lokhu kusho ukuthi ugula maningi amathuba. Uma ngokungazelelwe elahliwe umkhuhlane emathunjini, lapho esaba, mhlawumbe, isizathu siwukuthi le amaphijama ezingcolile.
Lithatha isikhwama sezibuko icala - accessory stylish futhi ewusizo
Partenit. Izibuyekezo mayelana ukuphumula, noma Crimean Enye Tale
Eye amaconsi 'Oftolik'
Jigsaw: ukubuyekeza ongakhetha ehloniphekile. Indlela ukukhetha jigsaw
Floor amabhodi: kanjani ukukhetha
Kuyini kubalulekile ukwazi mayelana abasha lokushisa lamanzi umama ukugeza wokuhlamba izinsana
Ezithakazelisa kakhulu sweet uhala
Crimean amanzi ipaki "Banana Republic"